ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် မင်းဘူးမြို့ရှိ နဂါးပွက်တောင်မှ ရွှံ့ချော်ရည်များ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ လျှံကျ ~ RANGON NEWS DAILY
ပုဂံညောင်ဦးတွင် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ဘုရားစေတီပေါင်း (...
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် လှုပ်ခတ...
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် မင်းဘူးမြို့ရှိ နဂါးပွက်တောင်မှ ရွှ...
ငလျင်ကြောင့် ပုဂံရှိဘုရားစေတီများ ပြိုကျပျက်စီး.
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြို့ကြီးများ အချို့တွင် ငလျင်လှုပ...
အီတလီအလယ်ပိုင်းကို ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ ငလျင်
အီတလီနိုင်ငံ ပြင်းအား ၆.၅ မက်နိကျူ ရှိ ပြင်အားကောင...
ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် မင်းဘူးမြို့ရှိ နဂါးပွက်တောင်မှ ရွှံ့ချော်ရည်များ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ လျှံကျ
8:02 AM KhinMaung Latt No comments
RangonNewsDaily::Thursday. August 25. 2016
ယနေ့ ညနေပိုင်းက လှုပ်ခတ်ခဲ့သော ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် မကွေးတိုင်း မင်းဘူးမြို့ နဂါးပွက်တောင်မှ ရွှံ့ချော်ရည်များ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်သို့ လျှံကျခဲ့ပြီး နဂါးပွက်တောင်ဝန်းကျင်တွင် အက်ကြောင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နဂါးပွက်တောင်အခြေရှိ တန်ဆောင်းတော်ကြမ်းပြင် အုတ်ခုံတစ်ပြင်လုံးတွင် အက်ကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ထိုတောင်တော်ရှေ့ မင်းဘူးကျောက်တန်း ကတ္တရာလမ်းတွင်လည်း မြေသားမို့မောက်ခြင်းနှင့် အက်ကြောင်းကွဲခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပင်မနဂါးပွက်တောင်သည် ည ၇ နာရီခွဲအချိန်ထိ ပုံမှန်ပွက်လျက် ရှိသော်လည်း မူလတောင်တော်၏ ယာဘက် (ဒေသအခေါ် မောင်တော်တောင်) သည် မူလနေရာတွင် မပွက်တော့ဘဲ အတက်အဆင်း လှေခါးနေရာတွင် ပြောင်း၍ ပွက်ထနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ငလျင်မှာ ယနေ့ (သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်) ညနေ ၅ နာရီ ၅ မိနစ်ခန့်က လှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မန္တလေး မြေငလျင်စခန်းမှ အနောက်တောင်ဘက် (၁၂၃) မိုင်ခန့် ကွာဝေးသော မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်း (ချောက်မြို့၏ အနောက်ဘက် (၁၂) မိုင်ခန့်အကွာ) ကို ဗဟိုပြု၍ အင်အားရစ်(ခ်) တာ စကေး (၆.၈)အဆင့်ရှိ အင်အားပြင်း ငလျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။
■ အောင်သူငြိမ်း/ EMG
Posted by : ကိုလတ် Cool Download Rox | Admin at 8:02 AM